Palmitoylethanolamide Powder Manufacturers Shina
Ny vovo-dronono Palmitoylethanolamide (PEA) dia amida asidra endogenous amide, an'ny kilasy …… ..
fahafahana: 1287kg / volana
Rova Palmitoylethanolamide rohe (544-31-0) video
Rohdy palmitoylethanolamide rohe (544-31-0) Specifications
Product Name Roaman-paolo Palmitoylethanolamide
Anarana simika Roherin'ny Palmitoylethanolamide;
Drug Class Amine, fanafody, fanafody mpanelanelana & simika tsara
molekiolan'ny Formula C18H37NO2
molekiolan'ny Wvalo 299.499 g / mol
mitsonika Point 93 hatramin'ny 98 ° C (199 hatramin'ny 208 ° F; 366 mankany 371 K)
Tavy 461.5 ° C amin'ny 760 mmHg
Ny antsasaky ny biolojia Tsy misy data azo alaina
Solubility Chloroform (Mandritra), Methanol (kely)
Rovam-pandehan'ny Palmitoylethanolamide Application Ny vovon-tsolika Palmitoylethanolamide Rohàna dia endogenous CB2 cannabinoid agonist receptor and agonist selective GPR55.
Rohdy Palmitoylethanolamide poopy (544-31-0) Description
Ny vovon-tsolika Palmitoylethanolamide Rohan (PEA) dia tsiranoka asidra tsiranoka, izay anisan'ny kilasin'ny agonists mpikatroka nokleary. Ny palmitoylethanolamide (PEA) dia novokarina tao amin'ny vatana mba hiadiana amin'ny fanaintainana sy ny fiterahana. Biby sy zavamaniry maro koa no mamokatra PEA. Ny habetsaham-be avo indrindra dia hita ao amin'ny lecithin soja, soja, akondro, ebony, ary alfalfa. Io asidra manerinerina io dia afaka mampivelatra tsara ireo cannabinoids voajanahary ary miaro ny hareza mandritra ny vatanao. Ny tombontsoany dia mandrisika amin'ny aretina maro samihafa.
Ny Palmitoylethanolamide dia naseho hifatotra amin'ny mpandray amin'ny sela-sela (mpandray nokleary) ary manome karazana biolojika maro karazana mifandraika amin'ny fanaintainana sy ny fivontosana. Ny tanjona voalohany dia heverina fa ny alpha receptor activated activated peroxisome alpha (PPAR-α). Na izany aza, ny fisian'ny Palmitoylethanolamide (sy ny N-acylethanolamines hafa mifandraika amin'ny rafitra) dia fantatra fa manatsara ny hetsika anandamide amin'ny alàlan'ny antsoina hoe "effet entourage". Ny vovon-tsakafo Palmitoylethanolamide / PEA dia naseho fa manana anti-inflammatoire, anti-nociceptive, neuroprotective ary anticonvulsant fananana.
Ho fanampim-panafody, ny PEA dia misy amin'ny tablette, capsule, ary vovo. Any Italy sy Espana, ny PEA dia mivarotra sakafo ho an'ny fitsaboana manokana.
Palmitoylethanolamide vovoka (544-31-0) Mekanisma amin'ny asa
Ny Palmitoylethanolamide dia manatsara ny hery manatsara ny herin'ny solika, ny fatotra ary ny fitepon'ny PPAR. Amin'ny fampidirana an'io proteinina manan-danja io, ny PEA dia manakana ny asan'ny famindrana amin'ny fiterahana sy ny famokarana voka-dratsiny maro.
Ny palmitoylethanolamide dia mampihena ny asan'ny FAA, izay manimba ny candabinoid anandamide voajanahary. Izany dia mampitombo ny habetsahatry ny fitsaboana anandamide ao amin'ny vatanao, manampy amin'ny ady amin'ny fanaintainana ary mampitombo ny fialam-boly. Azo atao ihany koa ny mihetsika ireo receptors cannabinoid (CB2 sy CB1).
Ny palmitoylethanolamide dia ahitana ny asidra palmitic ao amin'ny rafitra. Ny teboka fanombohana ny fanaovana PEA ao amin'ny vatana dia tena io asidra tazo marefo io.
Na izany aza, ny fampitomboana fotsiny ny fihinanana asidra palmitika na tavy fihinana hafa dia tsy hisy fiantraikany amin'ny famokarana Palmitoylethanolamide amin'ny vatana. Izany dia satria ny vatanao dia hampiasa PEA raha tsy mila manonitra ny fivontosana na ny fanaintainana, ary ny haavony koa dia hiovaova mandritra ny andro. Ny fomba tsara indrindra ahazoana tombony amin'ny PEA dia ny famenon-tsakafo avo lenta, na ny sakafo manankarena PEA.
Use ny powdy palmitoylethanolamide (544-31-0)
▪ Fitantanana fanaintainana
▪ Anti-milaza zavatra
▪ Manohitra ny tsy fahasalamana
▪ fananana anticonvulsant.
Ny fianarana bebe kokoa amin'ny fianarana dia mety ho tombontsoa fa mbola misy tahirin-kevitra ampy mba hilazana fa ny Palmitoylethanolamide dia singa tena miavaka. Na ny famenoana PEA maharitra aza dia tsy misy ifandraisany amin'ny vokatra ratsy rehetra. Palmitoylethanolamide dia nampiasaina tamin'ny doses an'ny 300 mg ka hatramin'ny 1.8 g / andro amin'ny fianarana klinika.
▪ 600 mg / andro farafahakeliny ilaina mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny nerve, raha fatra 1.2 g / isan'andro no ampiasaina amin'ny fanaintainan'ny nerve diabetika.
▪ PEA hatramin'ny 1.8 g / isan'andro no nampiasaina hampihenana ny fahasimban'ny hozatry ny maso amin'ireo olona voan'ny glaucoma na diabeta.
▪ Ho an'ny ady amin'ny sery mahazatra, 1.2 g / andro no fatra mahazatra.
▪ Azo zaraina roa mandritra ny andro ny fatra feno. Manoro hevitra izahay ny manomboka amin'ny doka mahazatra 1.2 g / andro mizara 600 mg ny maraina ary 600 mg ny tolakandro. Araho ny valinteninao ary ampitomboy tsikelikely ny fatra aorian'ny 1 volana raha ilaina izany.
Ny fanafody famonoana Palmitoylethanolamide mikronisma dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny fianarana dia ambony kokoa amin'ny endrika hafa. Ny Palmitoylethanolamide mikronisina dia vovoka tsara kokoa izay tsara kokoa sy mandaitra kokoa. Ny palmitoylethanolamide miaraka amin'ny luteoline dia nampiasaina ihany koa tao amin'ny fisedrana ara-pitsaboana ary mety ho tsara ho an'ny fahasalaman'ny atidoha.
soa azo avy amin'ny Palmitoylethanolamide poids (544-31-0)
Hatramin'ny nahitana azy tamin'ny taona 1950, dia talanjona tamin'ny Palmitoylethanolamide ny mpikaroka. Amin'ny maha-painkiller voajanahary matanjaka sy azo antoka ary fanoherana ny inflammatoire, Palmitoylethanolamide dia manolotra fanantenana ho an'ny olona marobe mijaly amin'ny fanaintainana lava sy neuropathique. Afa-tsy io tombony io, ny vovoka Palmitoylethanolamide dia mety hanolotra tombontsoa mety ho an'ny fahasalamanao manokana. Misy tombony vitsivitsy ho fanovozan-kevitra:
♦ Ny PEA dia mampihena ny fanaintainana sy ny fivontosana
♦ Manatsara ny fahasalamana sy ny famerenana amin'ny laoniny ny ati-doha
♦ Tsara ho an'ny masonao
♦ Arovy ny fonao
♦ Mampihena ny fivontosan'ny vavony
♦ Mety hampihena ny soritr'aretina ketraka.
♦ mampihena ny soritr'aretin'ny sclerose marobe
♦ Mety hiady amin'ny sery mahazatra
♦ Mihena ny famoahana histamine
Mbola mitohy ny tombony vaovao azo avy amin'ny Palmitoylethanolamide, ka manjary very hevitra ny mpahay siansa sasany. Hay i Palmitoylethanolamide dia afaka mampihetsika ireo mpitsabo mpanampy cannabinoid koa, manatsara ny toe-po, mampihena ny allergy.
Inona avy ireo zava-misy ao amin'ny Palmitoylethanolamide (PEA) izay mahazo tombony amin'ny fatiantoka?